कला/साहित्य – Page6– News Of Nepal
तपाईं फेसबुकमा अरु बेसारे बनेको रमिता मात्रै हेरेर बसिरहनुभएको छ कि आफू पनि बेसारे बनिसक्नुभयो ? बेसारे बन्नुभएको छैन भने बनिहाल्नुहोस् । नत्र तपाईं सोसाइटीमा नपर्ने डर मात्र होइन, धेरै कुरामा पछि पर्नुहुन्छ । आफूले बेसारे बनाउन जानेको छैन, बनाएर पठाइदिने कोही छैनन् भनेर पनि चिन्ता नलिनुहोस् ।..
‘रेडियो नेपाल ।’ काँचको पारदर्शी ढोका अघिल्तिर पुगेर उनको ह्वीलचियर टक्क रोकिन्छ । ढोकामा सिंहदरबार परिसरको प्रतिविम्बलाई छल्दै एउटा अधवैंशे अनुहार देखा पर्छ । त्यही अनुहार, जसले असीमित पीडा लुकाएको छ । हिजो हीनताबोधले फतक्कै गलेको त्यो अनुहारमा आज प्रेरणाका आभा पोतिएको छ । सो अनुहारलाई चिनाउने..
पछिल्लो समय नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा बेग्लै पहिचान बनाउन सफल कर्णप्रिय स्वरकी धनी म्याग्देली चेली ईन्दु बानियाँले ‘आकाश पनि’ बजारमा ल्याएकी छिन् । यसअघि ‘दिलराजा, दिलरानी'को अपार सफलतापछि प्रेम समर्पणलेयुक्त ‘आकाश पनि' बोलको भिडियो सार्वजनिक गरेकी हुन् । ‘तिम्रो न्यानो त्यो काखैमा’, ‘सबै..
पछिल्लो समय नेपालको सांगितीक क्षेत्रमा निकै चलेका गितहरुमा संगित भर्ने काममा व्यस्त रहने युवाको नाम हो दिपक शर्मा । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–१, मा बाबा हरिलाल र आमा गौमती शर्माको कोखबाट २०४२ भदौ २१ गते जन्मेका शर्मा अहिलेको चर्चीत गितहरुमा संगित भर्नमै व्यस्त हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय चलेका..
मुकुन्दमणी घिमिरे तिमी पनि थुन्नियौरे लकडाउनले गर्दा मलाई पनि गाह्रो भा'छ होम क्वारेन्टाइन पर्दा कोरोनाको महामारीले गाज्यो बिस्वलाइ भोकमरीले सताएर तड्पीया छ्न कति नखाई आज उस्तै भोलि उस्तै महिनौं बिते उस्तै न त काम न त हिड्डुल शरीर दिमाग सुस्तै कहिले सम्म यस्तो हुने, कति मान्छे मर्ने ? मै हु..
जातीय विभेदविरुद्ध सबैले आवाज उठाऔं’:नायिका वर्षा सिवाकोटी
रुकुममा भएको घटनापछि नेपाली चलचित्रका कलाकारले यस बिषयमा आवाज उठाइरहेका छन् । केही कलाकारहरुले भिडियो मार्फत नै यो बिषयमा बोलेका छन् । नायक राजेश हमालले जातियताको नारा उचालेर फोहोर राजनीति भएको बताएका थिए । यस्तै, नायिका वर्षा सिवाकोटीले पनि यो बिषयमा भिडियामार्फत आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेकी छिन्..
यहीँ गोधुलीमा तिमि आउछु भन्थ्यौ म हरेक गोघुलीमा तिमिलाइ कुरीरहेछु यी सुन्तले रंग भरी .. तिम्रो मायाको रंग देख्छु छुन्छन यी रंगहरुले.. हिजोको तिम्रो सितल स्पर्श सम्झन्छु हिजोआज सबै लोभहरु रित्तियका छन् हिजोआज सबै चाहहरु सिदिएका छन् मात्रै एउटा लोभ जिउँदो छ गोधुलीमा तिमि आउने गोधुलीमा तिम्रो स्पर्श..
१ मे (१९ वैशाख) अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस । रचनाकार तथा गायक शिशिर योगीको फेसबुकमा एकाबिहानै नोटिफिकेसन आयो । सांसद भगवती न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा रचित कविता ट्याग गरेकी थिइन् । र, पढेर प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरेकी थिइन् । कविताको शीर्षक थियो, ‘अब आँसु खसाउनु पर्दैन’ । अब..
-मिना श्रेष्ठ घर देश बाट परदेश आएछि कोठा बाड्नु पर्ने नि हुदोरहेछ थुप्रै आए साथीहरू थुप्रै खाले भए भेटहरु खै? किन हो! तिमिलाई नै रोजे मैले तिम्रो साथ खोजे मैले थाहा थिएन .. तर.. हाम्रो साथ यति छोटो होला ,भनेर घरमा आए देखि , उ खोकी रहयो, सामान्य मान्यो क्षणमै ज्वरो बढ्यो, क्षणमै घट्यो क्षणमै सिरक..
-शेखर बिकल्प कुनैदिन कसैले सोधेथ्यो मलाई - तँ, कलम रोज्छस् या तरवार ? केहि बोलिन म त्यो दिन, हेरेँ आफै संग भएको सिसाकलम छामे सिसाकलमको टुप्पोलाई ! मलाई थाहा थियो उड्छ सिसाकलमको रङ मेटिन्छन अक्षरहरू सोँचे – आफैमा भएको गुमाएर के समाउनु अरू ?! त्यसपछी विस्तारै लेखेँ सिसाकलमले मान्छेका..